Iifayile ze-3 ze-WordPress ezifanele ukutshala imali-i-Geofumadas
Izixhobo ze-3 ze-WordPress zifanelekile ukutyala
Epreli, 2012 Internet kunye neBlogs, Ukugcinwa kweeblogi
I-WordPress ibonisa enye yezona zibonelo ezingcono zendlela uMthombo ovulekileyo onokuba ngayo imodeli yoshishino apho wonke umntu unenzuzo kwintengo efikelelekayo kwaye phantsi kweemeko zenkonzo ezingenayo inzondelelo imodeli yokuthengisa.
Akukho nto ngaphantsi kwesiqonga apho zinyuka ngaphezu kwesiqingatha sezinto eziqulathekileyo ezinomxholo kwi-Intanethi, ezikhethwa yiiblogi ezibalulekileyo. Kulabo bafuna ukumisa isayithi, i-WordPress ayinakucala ezintlanu, ukuba ine-hosting kunye ne-domain, kunye ncinane ukunyanzelisa Ungangena kwihlabathi apho amawaka eeplagiza, iikhompyutyana kunye nenkonzo yokuhlaziywa ngokubambisana eye yaba ngaphezu kokumangalisa.
Kule meko ndifuna ukubonisa iiplagi ezintathu zeCodecanyon ezingenasikhulu, kodwa ekufanelekile ukutshala imali idola ezimbalwa:
1. Pro Pro Dowloads Pro
Oku kunceda ukwenza umxholo okanye ukukhuphela izixhumanisi. Ukucinga ukuba unefayile yepropati yakho kwaye ufuna ukuyithengisa kwi-intanethi, ikuvumela ukuba udibanise i-akhawunti ye-PayPal, phakathi kwezinye iindlela zokuhlawula ezinokudibana nekhadi okanye i-debit card.
Ngalokhu, unokudibanisa iifayile zokulanda, ukwenzela ukuba umsebenzisi enze intlawulo yakho ufumana unxibelelwano kunye neentsuku ezimbalwa zokuqinisekisa njengoko zilungiselelwe.
Nangona kukho abanye, oku kusebenza kakhulu, kuvumela ukuba amaqhosha kunye nokulandwa okukhethiweyo akupheli. Amanani angatshintshwa naliphi na ixesha kwaye ukuba ixabiso le-0.00 lisetyenzisiweyo, iqhosha liba likhupha ngokuthe ngqo kwaye linikezelo okanye ukukhushulwa kunokunikezelwa ekugqibeleni.
Ayinakudla iirandi ze-14, apho i-inshorensi ihlawula ngokukhawuleza. Njalo xa kuthengiswa i-imeyile, i-imeyili ikwazisa ngenkokhelo, igama lomsebenzisi elithengile umkhiqizo, isimo sokutshintshwa kwe-PayPal kunye nepaneli onokubeka esweni indlela ezo ntengiso zihamba ngayo.
2. Facebook njengokukhuphela
Le yinye iplagin, efana neyokudlulileyo kunye nomlinganiselo, ovumela abasebenzisi ukuhlawula ukukhuphela kunye nokufana nekhasi le-Facebook.
Eyona nto ibalulekileyo, kuba inceda ukwandisa inani labalandeli kwi-Facebook, into enokuyenza nanamhlanje, ukongeza ixabiso elongeziweyo ngokukhuphela.
Kukho iplagin efanayo esebenza nge-Twitter.
3. Yenza i-Sidebar (IiNdawo zoLwabiwo eziKhethekileyo)
Undibetha ngokukodwa kuba kukuvumela ukuba uchaze umxholo othile ofuna ukuba uboniswe kwibar yebhanki yeblogi / isayithi mhlawumbi ngeposi, uhlobo, iphepha, ukukhangela, njl.
Isixhobo esithakazelisayo ukuba sifuna ukunxibelelana nesigijimi esithile okanye isikhangiso kwinqaku elithandwa kakhulu. Njengokuhanjiswa kwezithuthi ukusuka kwinqanaba okanye nokuba namaphepha aphukile. Ixabisa iidola ze-15, kodwa iyayixabisa.
Post edlulileyo«Edlulileyo Guqulela zika ethile ngeshumi, UTM nokuzoba in AutoCAD
Post Next ICadastre, ichazwe kwinguqu eyaziwayoOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 kwi "3 Plugins ye-WordPress efanelekileyo ukutshala imali"
Ngokuqinisekileyo ndiyimito ye-conheça isto assunto Ndiyinyani
Zonke okanye iipontos você fez.
Phakathi kwezi zintathu ndikhetha i-Facebook, namhlanje udala i-facebook efanelekileyo yeqela le-facebook liphantse ukuba uhlawule umxokozelo, ekuhambeni kwexesha, kulula. Ukubulisa